Celebrities Archives - Page 227 of 285 - ShwengweGames
ကိုယ်ဝန် (၆) လရှိ‌နေပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူအတွက် အာမခံ မရလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ မင်းရာဇာ
August 12, 2020 August 12, 2020 by Shwengwe Games
အိမ်အကူမိန်းကလေးအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ မုဒိန်းမှုတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာက အာမခံမရခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိမ်အကူမိန်းကလေးအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊မုဒိန်းမှုတိုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာကိုဒီနေ့ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်ကမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ ရုံးချိန်းမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူအတွက်အာမခံလျှောက် ထားခဲ့ပေမယ့်အာမခံမရခဲ့တဲ့အပေါ် သူ့ရဲ့သဘောထားကို မီဒီယာတွေကနေတဆင့် ပြောပြလာပါတယ်။
“သမီးနဲ့ သားလည်းအပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့မိန်းမအတွက်အာမခံလျှောက်ထားတာအခုချိန်ထိအာမခံ မရပါဘူး။အာမခံကိစ္စကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန် တော်တို့မိသားစုကကျွန်တော့်ကိုမှီခိုနေရတာဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်မရှိလည်းမိန်းမရှိနေမှဖြစ်မှာလေ။သားနဲ့ သမီးရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျောင်းသွားဖို့တွေကလည်းအဲဒါတွေအဆင်ပြေမှရမှာပါ။ကိုယ်ဝန်နဲ့ကျတော့အထဲမှာနေရတာ အဆင်မပြေဘူး” ဒီနေ့ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့ရုံးချိန်းအပြီး အချုပ်ကားပေါ် ကနေ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ရုံးချိန်းမှာလည်းတရားလိုဘက်ကရုံးချိန်းတက်ရောက်မလာပြန်ဘူးလို့မင်းရာဇာကဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ အမှန်တရားကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသင့်နေပြီလို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“ သားက သိပ်နေမကောင်းဘူး။ သမီးလေးကတော့ လွမ်းဖျား ဖျားနေတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းတရားလို မလာဘူးဗျာ။သူတို့အိမ်တွေဘာတွေပြောင်းသွားတယ်လို့တော့ကြားတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။အမှန်အတိုင်းဖြေရှင်းဖို့သင့်ပါတယ်။အခုဆိုကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ကိုယ်ဝန်ကလည်းအခုဆို (၅)လကျော်လို့(၆)လထဲရောက်နေပါပြီ။”လို့ဆက်လက် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာဟာ ဇူလိုင်လ (၂၂) ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတုန်းကတရားလိုမိန်းကလေးရဲ့နာမည်အရင်းကို မီဒီယာတွေအရှေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့အတွက်၂၀၁၉ ခုနှစ်ကလေးသူငယ်များ အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတယ်လို့တရားလိုဘက်က ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က Duwun ကိုပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။မြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ရုံးချိန်းတွေမှာမင်းရာဇာ ဖြေဆိုခဲ့တဲ့စကားတိုင်းကိုတရားလိုဘက်က မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ်အားညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာ အပါအဝင် ၄ ဦးကို မေ ၇ ရက်နေ့က မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တရားရုံမှာပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မင်းရာဇာရဲ့ယောက္ခထီးဖြစ်သူအငြိမ်းစား ရဲဝန်ထမ်းဦးမောင်မောင်အေးကတရားရုံးမှာငွေကျပ် ၁၀ သိန်းဖြင့် အာမခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းရာဇာနဲ့ အပေါင်းအပါ (၃)ဦးကို အိမ်အကူမိန်းကလေးအားအက်စစ်နဲ့ပက်မှုဖြင့်မိန်းကလေးရဲ့ မိခင်က ရွှေပေါက်ကံရဲစခန်းမှာ(ပ)အမှတ် ၅၀၅၊ ပုဒ်မ ၃၂၄၊ ၃၂၅၊ ၃၅၄၊ ၁၁၄ တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေကို မကြိုက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
August 12, 2020 by Shwengwe Games
ချစ်သုဝေကတော့ အဆိုတော်၊သရုပ် ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် ပညာရေးမှာထူးချွန်သလို ပရဟိတတွေကိုစိတ်အားထက်ထက်သန်သန်လုပ်တာကြောင့် လေးစားအားကျစရာကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့မနေ့ကမွေးနေ့ရက်မြတ်လေးကျရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Surprise လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူစိမ်းဆိုရင်တော့ ဥပက္ခာပဲ ဒေါသကြီးတယ် နှုတ်မချိုဘူး ခွင့်လွှတ်လွယ်တယ်ချစ်တတ်တာလည်း စိတ်ကုန်စရာ ပြောမနေနဲ့တော့ ကွယ်ရာမှာလည်းဒီလူ ဒီစိတ် ဒီနှုတ် ဒီခံယူချက်ပဲ ရှေ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတော့ကားပြင်ရမယ့်မကောင်းတဲ့အချက်အတော်များသပေါ့ဒါတောင်ကိုယ့်ကိုချစ်ပေးကြတဲ့ကိုယ့်အနားက ကိုယ့်အဝေးကသူတွေကြောင့် tre lay ဟာ တအားကို ကံကောင်းပါသည်ဟုမှတ်ယူရင်း…Wish လုပ်ပေးကြသူတစ်ယောက်ချင်းစီလည်း စိတ်ချမ်းသာ၍လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားတာပါ။
အေပၚယံဟန္ေဆာင္မႈေတြကို မႀကိဳက္တတ္တဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ ခ်စ္သုေဝ
ခ်စ္သုေဝကေတာ့ အဆိုေတာ္၊သ႐ုပ္ ေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ကိုရရွိထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရးမွာထူးခြၽန္သလို ပရဟိတေတြကိုစိတ္အားထက္ထက္သန္သန္လုပ္တာေၾကာင့္ ေလးစားအားက်စရာေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့မေန႕ကေမြးေန႕ရက္ျမတ္ေလးက်ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Surprise လုပ္ေပးတဲ့သူေတြေၾကာင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႕မွာေတာ့ အသက္တစ္ႏွစ္ႀကီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ထရီဇာတစ္ေယာက္က အျဖဴေရာင္ျမန္မာဝတ္စုံေလးနဲ႕အတူ “အသက္ ၃၆ စိတ္ျမန္တယ္..ဘယ္ေလာက္ျမန္လဲဆို စိတ္ကမွန္းရင္လူကခ်က္ခ်င္းလိုက္လုပ္တတ္တာမ်ိဳး စိတ္ရွင္းရွင္းပဲထားတယ္ (ဘယ္ေလာက္ရွင္းခ်င္လဲဆို ကိုယ့္ကို လာေဝွ႕ပတ္မယ္, ေကြ႕ဝိုက္ေနမယ္ ေကာက္ေနမယ္ဆို မိတ္ေဆြေတြဆို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေမးၿပီးသားပဲ။ အသိေတြဆို ဒစ္ပလိုမက္တစ္ေတြဘာေတြကိုေခါင္းထဲမထားဘူး ဟန္ေဆာင္ၿပီးမရီျပခ်င္ဘူး(အႏၲာရယ္ရွိမွန္းသိရက္နဲ႕ဘာလို႔အေပၚယံေပါင္းရမွာလဲေနာ္)။
သူစိမ္းဆိုရင္ေတာ့ ဥပကၡာပဲ ေဒါသႀကီးတယ္ ႏႈတ္မခ်ိဳဘူး ခြင့္လႊတ္လြယ္တယ္ခ်စ္တတ္တာလည္း စိတ္ကုန္စရာ ေျပာမေနနဲ႕ေတာ့ ကြယ္ရာမွာလည္းဒီလူ ဒီစိတ္ ဒီႏႈတ္ ဒီခံယူခ်က္ပဲ ေရွ႕မွာလည္းဒီတိုင္းပဲဒီေတာ့ကားျပင္ရမယ့္မေကာင္းတဲ့အခ်က္အေတာ္မ်ားသေပါ့ဒါေတာင္ကိုယ့္ကိုခ်စ္ေပးၾကတဲ့ကိုယ့္အနားက ကိုယ့္အေဝးကသူေတြေၾကာင့္ tre lay ဟာ တအားကို ကံေကာင္းပါသည္ဟုမွတ္ယူရင္း…Wish လုပ္ေပးၾကသူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၍လိုအင္ဆႏၵမွန္သမွ် ျပည့္စုံနိုင္ပါေစ” ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးသားထားတာပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသတ်တဲ့ မွေ့ယာကို ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီ
ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီဟာ သူ့မိသားစုကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသတ်ပေးနိုင်တဲ့ မွေ့ယာကို ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီမွေ့ယာဟာ Tec Moon ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး မွေ့ယာပေါ်မှာ ၄ နာရီကြာ အိပ်စက်ရုံနဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Tec Moon ကုမ္ပဏီဟာ မွေ့ယာစျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အက်သလက်တီကို ကွင်းလယ်လူ ဆောနီဂွက်ဇ်ကို Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် သတ်ပေးနိုင်တဲ့မွေ့ယာကို ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီ အပြင် မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူး အဂူရို လည်း ဝယ်ယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
Tec Moon မွေ့ယာဟာ ပေါင် ၉၀၀ တန်ကြေးရှိပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူက အဲဒီပေါ်မှာ ၄ နာရီကြာအိပ်စက်ရုံနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်သွားစေတဲ့ အစွမ်း ရှိပါ တယ်။ မွေ့ယာကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ Viruclean နည်းပညာ တစ်ရှူးမှုန်တွေနဲ့ စီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Tec Moon မွေ့ယာဟာ မော်ဒယ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ခြေထောက်ကို နှိပ်နယ်ပေးတာတွေလည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မက်ဆီဟာ သူ့နိုင်ငံအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကာကွယ်ရေးအတွက် ပေါင် ၄ သိန်း ၄ သောင်းလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသတ္တဲ့ ေမြ႕ယာကို ဝယ္ယူလိုက္တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင္းေခါင္းေဆာင္ မက္ဆီ
ဘာစီလိုနာအသင္းေခါင္းေဆာင္ မက္ဆီဟာ သူ႕မိသားစုက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးသတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေမြ႕ယာကို ဝယ္ယူခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေမြ႕ယာဟာ Tec Moon ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ၿပီး ေမြ႕ယာေပၚမွာ ၄ နာရီၾကာ အိပ္စက္႐ုံနဲ႔ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို သတ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Tec Moon ကုမၸဏီဟာ ေမြ႕ယာေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အက္သလက္တီကို ကြင္းလယ္လူ ေဆာနီဂြက္ဇ္ကို Brand Ambassador အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္ သတ္ေပးႏိုင္တဲ့ေမြ႕ယာကို ဘာစီလိုနာအသင္းေခါင္းေဆာင္ မက္ဆီ အျပင္ မန္စီးတီးတိုက္စစ္မႉး အဂူ႐ို လည္း ဝယ္ယူထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
Tec Moon ေမြ႕ယာဟာ ေပါင္ ၉၀၀ တန္ေၾကး႐ွိၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသူက အဲဒီေပၚမွာ ၄ နာရီၾကာအိပ္စက္႐ုံနဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ကင္းစင္သြားေစတဲ့ အစြမ္း ႐ွိပါ တယ္။ ေမြ႕ယာကို ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္တဲ့ Viruclean နည္းပညာ တစ္႐ွဴးမႈန္ေတြနဲ႔ စီမံထားတာျဖစ္ပါတယ္။
Tec Moon ေမြ႕ယာဟာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ေျခေထာက္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးတာေတြလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မက္ဆီဟာ သူ႕ႏိုင္ငံအာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံက ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကာကြယ္ေရးအတြက္ ေပါင္ ၄ သိန္း ၄ ေသာင္းလႉဒါန္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
မြန်မာမကျော်ပေမယ့် ကမ္ဘာကျော် နေတဲ့ မြန်မာလူငယ်တေးသံရှင်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်
Amazon မှာ ရောင်းချနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Burmese Song ရဲ့ နောက်ကွယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်‌ကျော် ၂၀၁၁ တဝိုက်မှာ ရှိုင်းမင်းအောင် ၊ဂျူလှိုင်ထွန်း နဲ့ ရဲထွေး တို့ လူငယ်တွေ ပူးပေါင်းပြီး မေမြို့သူ ဆိုတဲ့ Mp-3 အယ်ဘမ် တခုကို ထုတ်ခဲ့ကြတယ် ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပါးစပ် မှာ စွဲနေရစ်တဲ့ ” မအတွက်” ဆိုတဲ့ သီးချင်းတပုဒ်ဟာလဲ မေမြို့သူ အယ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် အဆိုတော်ဟာ ဟိုလေးတကျော် ဖြစ်တဲ့အထဲ မပါခဲ့ပါဘူး လူသိမများခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးမှာ မန္တလေး သား ရဲ့ ” မအတွက် ” သီချင်းဟာ တရုတ်ပြည်ဆီ အလည် သွားခဲ့ပြီး တရုတ်ပရိတ်သတ်က အကြီးအကျယ် နှစ်သက် လက်ခံခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီလို့နဲ့ ” မအတွက် ” သီချင်းဟာ တရုတ် TikTok မှာ တွေ့ရစိတ်လာသလို Cover သီဆိုသူတွေလည်း များလာပါတယ်။ ” Pure Litty Girl ” လို့ သူတို့ နားလည်သလို ပေးထားတဲ့ ” မအတွက်” သီချင်းဟာ နိုင်ငံတကာက နားဆင်သူအပေါင်းက ဘာသီချင်းလည်း နားထောင်ကောင်းတယ် လို့ Comments ပေးကြတဲ့ Burmese Song တပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ beautiful Burmese Song ရဲ့ အလားအလာဟာ ဒီနေ့ထိ ရပ်တန့်မသွားသေးပါဘူး ။ 2019 ကနေ ယနေ့ထိ ” မအတွက် ” သီချင်းကို Foreign MTV တခုခုရဲ့ နောက်ခံ မှာ တွေ့လိုက်တိုင်း သူ့နောက်မှာ နောက်ခံသီချင်း Name က ဘာလဲ ဆိုတာ မေးနေကြတုန်းပါ ။
နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်ဘက်က ” မအတွက်” သီချင်းရဲ့ မူပိုင်ရှင်ကို လိုက်ရှာနေတယ် ။ Copyright ၀ယ်ချင်လို့လို့ ကြားရပါတယ် ။ ‌မြန်မာ Music Industry ကရော Media ကပါ နိုင်ငံကျော်နေတဲ့ ” မအတွက် “သီးချင်းအကြောင်း မှတ်ချက်တွေ မပေးခဲ့ကြပါဘူး ၊ အင်တာဗျူးတွေ မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် များမကြာမီက” မေမြို့သူ ” အယ်ဘယ်ကို သီဆိုခဲ့တဲ့ ” Shine Min Aung ” နဲ့ ” July Tun ” ဆီက “ချူချူချာချာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်ကို တရုတ်က ၀ယ်သွားတဲ့အ‌ကြောင်း Shine Min Aung ရဲ့ Personal Account မှာ တင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ ဒီမှာတင်ရပ်တန့်မသွားပါဘူး ။ အဲ့တာကတော့ July Tun” ရဲ့ ” မအတွက် ” Mp-3 Album ကို Amazon မှာ ရောင်းချနေတာကို တွေ့လိုက်ရတာပါပဲ ။ အယ်ဘမ်ကို တရုတ်စာတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် တရုတ်ဘက်က copyright ကိုင်ပြီးရောင်းချနေတာလို့ သိရပါတယ် ။ အဆိုတော် July Tun ရဲ့ FB အကောင့် နဲ့ ဖွင့်ထားတာမကြာသေးတဲ့ Page မှာ လေ့လာမိသလောက်တော့ သူဟာ Amazon မှာ ရောင်းနေတဲ့ သူ့သီချင်းရဲ့ copyright ကို ရောင်းချထားဟန်မတူပါဘူး ။
ဆိုတော့ တရုတ်ဘက်က ၀ယ်ယူသွားတဲ့ July Tun ရဲ့ နောက်သီချင်း‌တွေအပေါ် တရုတ်ပရိတ်သတ်တွေ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ကြမလဲ ၊ မြန်မာ့ Music Industry ကြီးက July Tun အပေါ်အမြင်ဘယ်လိုရှိသလဲ ၊ July Tun ဟာ ကမ္ဘာမှာ Myanmar-Pop , Burmese-Pop စာမျက်နှာတခု ဖွင့်နိုင်မလား …ဆိုတာက စိတ်၀င်စားစရာ စောင့်ကြည့်ရမယ့်အချက်ပါ ။
ဒီ “မအတွက်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဟာ တရုတ်ပြည်မှာလဲ နာမည်ကြီးနေသလို တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း Amazon ကနေ၀ယ်ယူပြီး နားထောင်ကြ Tik Tok မှာ ပြန်ဆိုကြနဲ့ တော်တော်နာမည်ကြီးနေပါပြီ
“မအတွက်” သီချင်းလေးကို ပြန်ဆိုထားကြတာကို Video လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာသီချင်းတစ်ပုဒ် ခုလို ကမ္ဘာကျော်တာဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုဏ်ယူစရာပါ…သီချင်းပိုင်ရှင်ကို ရှာဖွေပြီး သေချာ၀ယ်ယူပြီး ပြန်ရောင်းပေးတဲ့သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ..
မြန်မာ သီချင်းကို ကမ္ဘာကျော်အောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ “Shine Min Aung နှင့် July Tun တို့ ဒီထက်မက အောင်မြင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဒါက Tik Tok မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ video ပါ
July Tun ရဲ့ Mp-3 သီချင်းများကို နားဆင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Oo Oo July Tun ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ Personal Facebook Page
ဒါက​ေတာ့​ဗ်ာ……ဟိုးအရင္​က သီခ်င္​း​ေလး​ေတြ​ေရာ…. ခု​ေနာက္​ပိုင္​းသီခ်င္​း​ေလး​ေတြ​ေရာ…….Down…
Gepostet von Oo Oo July Tun am Dienstag, 12. Dezember 2017
ကနေ ၀င်‌ရောက် နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
@act ( Human resource)
https://uc.xyz/2xY4KH?pub=link [清新的小女孩 by July Tun on Amazon Music – Amazon.com] is good,havealook at it!
မွေးနေ့အလှူအဖြစ် မိုးကုတ်မြို့ကုတင် (၁၀၀)ဆန့် ဆေးရုံ မှာ လူ (၄၅၀) စာအတွက် အာဟာရဒါနလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
August 11, 2020 by Shwengwe Games
နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံအကယ်ဒမီဆုတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့သိမ်းပိုက်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သြဂုတ်လ(၁၀)ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ မနေ့ကတော့ အသက်(၃၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီးချောလေးဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ မွေးနေ့မရောက်ခင်ကတည်း က မွေးနေ့အလှူအဖြစ် အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် မိုးကုတ်မြို့ကုတင် (၁၀၀)ဆန့် ဆေးရုံ မှာ လူ (၄၅၀) စာအတွက် အာဟာရဒါနလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “မနေ့က ကစ်မွေးနေ့ August 10 ရက်နေ့မှာ မွေးနေ့အမှတ်တရအလှူအဖြစ် မိုးကုတ်မြို့ကုတင် 100ဆန့် ဆေးရုံ မှာ လူ 450 စာအတွက် လှူဖြစ်တဲ့ အာဟာရဒါနကုသိုလ်လေးပါ။ မိုးကုတ်မှာ ကစ်မရှိနေပေမယ့် အလှူဖြစ်မြောက်အောင် ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးကြတဲ့ ကစ်အမျိုးတွေ, မိုးကုတ်မှရပ်ဆွေရပ်မျိုးများနဲ့လုပ်အားပေးကူညီကြတဲ့ သူတယောက်ချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ လူကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်ပေမယ့်လည်း မိုးကုတ်မှာ အလှူလေးပြုဖြစ်အောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီကျသူတွေကိုလည်း ကျေးဇူတင်စကားဆိုထားပါသေးတယ်နော်။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကုတင္ (၁၀၀)ဆန႔္ ေဆး႐ုံ မွာ လူ (၄၅၀) စာအတြက္ အာဟာရဒါနလႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္
ႏိုင္ငံေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားစြာမွာလည္းပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးအေကာင္းဆုံအကယ္ဒမီဆုေတြကိုထိုက္ထိုက္တန္တန္နဲ႔သိမ္းပိုက္ထားသူပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔ျဖစ္တဲ့ မေန႔ကေတာ့ အသက္(၃၂)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
မင္းသမီးေခ်ာေလးဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ကေတာ့ ေမြးေန႔မေရာက္ခင္ကတည္း က ေမြးေန႔အလႉအျဖစ္ အလႉအတန္းေတြျပဳလုပ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ ေမြးေန႔အလႉအျဖစ္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကုတင္ (၁၀၀)ဆန႔္ ေဆး႐ုံ မွာ လူ (၄၅၀) စာအတြက္ အာဟာရဒါနလႉဒါန္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို “မေန႔က ကစ္ေမြးေန႔ August 10 ရက္ေန႔မွာ ေမြးေန႔အမွတ္တရအလႉအျဖစ္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကုတင္ 100ဆန႔္ ေဆး႐ုံ မွာ လူ 450 စာအတြက္ လႉျဖစ္တဲ့ အာဟာရဒါနကုသိုလ္ေလးပါ။ မိုးကုတ္မွာ ကစ္မရွိေနေပမယ့္ အလႉျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပါ၀င္ကူညီလႉဒါန္းေပးၾကတဲ့ ကစ္အမ်ိဳးေတြ, မိုးကုတ္မွရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးမ်ားနဲ႔လုပ္အားေပးကူညီၾကတဲ့ သူတေယာက္ခ်င္းစီကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ေနာ္” ဆိုျပီး သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္နွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ပရိသတ္ၾကီးေရ နိုင္ငံေက်ာ္မင္းသမီးေခ်ာေလး ဝတ္မႈံေရႊရည္ကေတာ့ လူကိုယ္တိုင္မသြားနိုင္ေပမယ့္လည္း မိုးကုတ္မွာ အလွဴေလးျပဳျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီက်သူေတြကိုလည္း ေက်းဇူတင္စကားဆိုထားပါေသးတယ္ေနာ္။
လူတွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယ ခါး အသေးဆုံးဖြစ်တဲ့မစုမို့မို့နိုင်
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မစုမို့မို့နိုင်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယမြောက် ခါအသေးဆုံးအဖြစ် ဗြိတိန်မီဒီယာ Daily Mail ကဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသူလေးဖြစ်ပါတယ်သူမကို ဖေ့စ်ဘုတ် ဆယ်လီ နေဆန်းကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူမရဲ့ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာပါ
နေဆန်းကသူမရဲ့ခါးဟာ ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ ပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ဘဲ တကယ့်အစစ်ဖြစ်နေလို့အံ့ဩမိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်အခုလိုခါးသေးနေတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေခံရတဲ့အကြောင်း မစုမို့မို့နိုင်ကမျက်ရည်တွေနဲ့ ရင်ဖွင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
မစုမို့မို့နိုင်က “လက်ရှိ ခါး အရွယ်အစားက (၁၆) လက်မခွဲ ၊ ရင်က(၃၀)လက်မ ၊တင်က (၃၅) လက်မ၊အသက် (၂၁) နှစ် ရှိပါပြီ။တတိယနှစ် Botany မေဂျာသင်ယူနေပါတယ်” လို့ သူမကိုယ်သူမမိတ်ဆက်လာခဲ့တာပါ
ဒါ့အပြင်မစုမို့မို့နိုင်က “”ဒီလောက် ခါးသေးနေတာယောကျာ်းယူ လို့ ရပါမလား .ကိုယ်၀န်ဆောင်လို့ ရပါမလား.ပုရွက်ဆိတ်ကြီးပန်းအိုးကြီးစသဖြင့် အမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုတွေ ခံခဲ့ရတယ်။ သမီး အတွက်ကတော့ ဒီဖြစ်တည်မှုက ကံကောင်းတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ လက် ခံ ရမယ်.ဂရုစိုက် ရမယ်။ ”လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
” အရင်ကဆို တဝိုင်းတည်းတူတူထိုင်ရင်တောင် စကားမပြောချင်ကြဘူး အမေကလည်းနင်ကသူများနဲ့မှမတူတာဆိုပြီးပြောတယ် ” လို့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံခဲ့ရပုံကိုပြောပြလာခဲ့တာပါ ပရိ သတ်ကြီးရေ
ဒါကတော့ သေးငယ်တဲ့ ခါးအရွယ်အစားကြောင့် ကမ္ဘာက ပါ စိတ်ဝင်စားခြင်း ခံနေရတဲ့ ပဲခူးသူလေး စုမို့မို့နိုင် ကသူမဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရပုံတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ စုမို့မို့နိုင်အတွက်အားပေးစကားလေး ပြောခဲ့ကြပါအုန်းနော်
လူေတြရဲ႕ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေတြနဲ႕ဘယ္သူမွစကားမေျပာတဲ့အထိ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းဝမ္းနည္းစြာေျပာျပလာတဲ့ကမာၻမွာ ဒုတိယ ခါး အေသးဆုံးျဖစ္တဲ့မစုမို႔မို႔နိုင္
အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ မစုမို႔မို႔နိုင္ကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ ဒုတိယေျမာက္ ခါအေသးဆုံးအျဖစ္ ၿဗိတိန္မီဒီယာ Daily Mail ကေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသူေလးျဖစ္ပါ တယ္သူမကို ေဖ့စ္ဘုတ္ ဆယ္လီ ေနဆန္းကသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕ပုံေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခဲ့တာပါ
ေနဆန္းကသူမရဲ႕ခါးဟာ ဓာတ္ပုံပညာနဲ႕ ျပဳျပင္ထားတာမဟုတ္ဘဲ တကယ့္အစစ္ျဖစ္ေနလို႔အံ့ဩမိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္အခုလိုခါးေသးေနတဲ့အတြက္ ေဝဖန္မႈေတြခံရတဲ့အေၾကာင္း မစုမို႔မို႔နိုင္က မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ ရင္ဖြင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္
မစုမို႔မို႔နိုင္က “လက္ရွိ ခါး အ႐ြယ္အစားက (၁၆) လက္မခြဲ ၊ ရင္က (၃၀) လက္မ ၊ တင္ က (၃၅) လက္မ၊ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။တတိယႏွစ္ Botany ေမဂ်ာ သင္ယူေနပါတယ္” လို႔ သူမကိုယ္သူမမိတ္ဆက္လာခဲ့တာပါ
ဒါ့အျပင္မစုမို႔မို႔နိုင္က “”ဒီေလာက္ ခါးေသးေနတာေယာက်ာ္းယူ လို႔ ရပါမလား .ကိုယ္၀န္ ေဆာင္လို႔ ရပါမလား.. ပု႐ြက္ဆိတ္ႀကီး .ပန္းအိုးႀကီး စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္မႈေတြ ခံခဲ့ရတယ္။ သမီး အတြက္ကေတာ့ ဒီျဖစ္တည္မႈက ကံ ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ကိုယ့္ ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကိုယုံယုံၾကည္ၾကည္ နဲ႕ လက္ ခံ ရမယ္.. ဂ႐ုစိုက္ ရမယ္။ ” လို႔ဆိုလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္
” အရင္ကဆို တဝိုင္းတည္းတူတူထိုင္ရင္ေတာင္ စကားမေျပာခ်င္ၾကဘူး အေမကလည္းနင္ကသူမ်ားနဲ႕မွမတူတာဆိုၿပီးေျပာတယ္ ” လို႔ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြခံခဲ့ရပုံကိုေျပာျပလာခဲ့တာပါ ပရိ သတ္ႀကီးေရ
ဒါကေတာ့ ေသးငယ္တဲ့ ခါးအ႐ြယ္အစားေၾကာင့္ ကမာၻက ပါ စိတ္ဝင္စားျခင္း ခံေနရတဲ့ ပဲခူးသူေလး စုမို႔မို႔နိုင္ ကသူမေဝဖန္တိုက္ခိုက္ခံရပုံေတြကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ စုမို႔မို႔နိုင္အတြက္အားေပးစကားေလး ေျပာခဲ့ၾကပါအုန္းေနာ္
မြန်မာဝတ်စုံလေးကို ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲကာချုပ်ဝတ်ထားတဲ့ မေလသံစဉ်
ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မေလသံစဉ်ကတော့ မြန်မာသံစဉ်သီချင်းတွေကို ပိုင်နိုင်အောင်စွာသီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။မေလသံစဉ်ကတော့ သူရဲ့သီချင်းတော်တော်များများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆိုလေ့ရှိပြီး တခြားအနုပညာရှင်တွေကိုလည်း တေးသီချင်းကောင်းများစွာရေးပေးလေ့ရှိပါတယ်။
သူကတော့ တေးရေး၊တေးဆိုတစ်ယောက်အဖြစ်ထူးချွန်ရုံသာမက တူရိယာတော်တော်များကိုကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်နိုင်ပါသေတယ်။ ယနေ့မှာတော့ မေလသံစဉ်ဟာ ပရိသတ်တွေကို “အနုပညာအလုပ်တွေ အားမပေးတော့ဘူးဆိုရင် အင်္ကျီလှလှလေးတွေပဲ ချုပ်ရောင်း‌တော့မယ်နော်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်ဆွဲကာချုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးကို ချပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ တေးရေး၊တေးဆိုတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်အရွယ်နဲကမလိုက်အောင်ထူးချွန်လွန်းတဲ့ မေလသံစဉ်ကတော့ သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ထူးချွန်တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စက်ချုပ်ပညာရပ်ကို ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်ဆွဲကာချုပ်ဝတ်ထားမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲကအတူ သက်သေပြလိုက်တာနော်။
ျမန္မာဝတ္စုံေလးကို ကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းဆြဲကာခ်ဳပ္ဝတ္ထားတဲ့ ေမလသံစဥ္
ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေမလသံစဥ္ကေတာ့ ျမန္မာသံစဥ္သီခ်င္းေတြကို ပိုင္ႏိုင္ေအာင္စြာသီဆိုႏိုင္သူတစ္ေယာက္ပါ။ေမလသံစဥ္ကေတာ့ သူရဲ႕သီခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး ကိုယ္တိုင္သီဆိုေလ့ရွိၿပီး တျခားအႏုပညာရွင္ေတြကိုလည္း ေတးသီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာေရးေပးေလ့ရွိပါတယ္။
သူကေတာ့ ေတးေရး၊ေတးဆိုတစ္ေယာက္အျဖစ္ထူးခြၽန္႐ုံသာမက တူရိယာေတာ္ေတာ္မ်ားကိုကြၽမ္းက်င္စြာတီးခတ္ႏိုင္ပါေသတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ ေမလသံစဥ္ဟာ ပရိသတ္ေတြကို “အႏုပညာအလုပ္ေတြ အားမေပးေတာ့ဘူးဆိုရင္ အက်ႌလွလွေလးေတြပဲ ခ်ဳပ္ေရာင္း‌ေတာ့မယ္ေနာ္” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကေန ကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္ဆြဲကာခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျမန္မာဝတ္စုံေလးကို ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေတးေရး၊ေတးဆိုတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္အ႐ြယ္နဲကမလိုက္ေအာင္ထူးခြၽန္လြန္းတဲ့ ေမလသံစဥ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ထပ္ထူးခြၽန္တဲ့ပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စက္ခ်ဳပ္ပညာရပ္ကို ကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္ဆြဲကာခ်ဳပ္ဝတ္ထားျမန္မာဝတ္စုံေလးနဲကအတူ သက္ေသျပလိုက္တာေနာ္။
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံ‌နေရတဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ရေးအကြောင်းကိုပွင့်လင်းစွာပြောပြလာတဲ့ကျော်ထက်အောင်
ကျော်ထက်အောင်ဟာ Myanmar Idol Season 1 ကတည်းက ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကို များစွာရရှိခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကတစ်ဆင့်နာမည်ရလာပြီးအခုဆိုရင် ခေါင်းဆောင်မင်းသား တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တွေရိုက်ကူးနေရပါပြီ။သူပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကလည်း ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ရုံမတင်ရသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျော်ထက်အောင်ရဲ့အချစ်ရေးအ ကြောင်းတွေကိုတော့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလူသိများလှတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျကနေတင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိ သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်ထက်အောင်ကပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားလှတဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းတွေကို ပြောပြလာပါတယ်။
“ အကုန်လုံးကမှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေသူ့ရှုထောင့်နဲ့ သူဆိုတာ ရှိကြတယ်။ကျွန်တော် ဘာမှ မဖြစ်ခင်အချိန်တုန်းကတော့ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့လေ။အခုတော့သူက အိမ်ထောင် တောင်ကျသွားပါပြီ။ ဝေဖန်မှုတွေဆိုတာကလည်း Myanmar idol (Season-1) ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ။ဒီအပေါ်မှာ ဘာမှ မခံစားရပေမယ့် ရိုက်ခတ်မှုတွေတော့ ရှိလာတာပေါ့။
ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်ဆိုတော့ကိုယ်က အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေနဲ့ သာမန်လူတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လို နေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကပြရမယ့် တာဝန်လည်းရှိနေပြန်တာကြောင့် ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အရာလေးတွေရှာဖွေရင်းကြိုးစားနေထိုင်တာပေါ့လေ” ဆိုပြီးတော့ သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့က ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။
ကျော်ထက်အောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အရာတွေမှာ အမှား ရှိခဲ့ရင်တောင်ဒီအမှားတွေထဲကနေ သင်ခန်းစာ ယူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲ အစကတည်းက ပရိသတ် ဝေဖန်မှုတွေ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ လူဆိုတာအမှားနဲ့ မကင်းကြပါဘူး။အမှားဆိုတာမျိုးက သူများ မိသားစု ပျက်စီးသွားအောင်၊စီးပွားပျက်သွားအောင်၊သူများသားမယားဖျက်ဆီးသွားအောင်၊သူများမိသားစု ဘဝတွေ စုတ်ပြတ် မသတ်သွားလို့ရှိရင် တချို့အမှားတွေကပြန်ချစ်ပေးလို့ရတဲ့ အရာတွေရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူများ အမှား၊ ကိုယ့်အမှားတွေကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး သင်ခန်းစာ ဘယ်လို ယူရမလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာ” လို့ဆက်လက် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈကို ခံ‌ေနရတဲ့သူ႕ရဲ႕အခ်စ္ေရးအေၾကာင္းကိုပြင့္လင္းစြာေျပာျပလာတဲ့ေက်ာ္ထက္ေအာင္
ေက်ာ္ထက္ေအာင္ဟာ Myanmar Idol Season 1 ကတည္းက ပရိသတ္ေတြ အားေပးမႈကို မ်ားစြာရရွိခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ နာမည္ရလာၿပီး အခုဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္မင္းသား တစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕ပါ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး ေတြရိုက္ကူးေနရပါၿပီ။သူပါဝင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြကလည္း ႐ုံတင္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ႐ုံမတင္ရေသးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္ေအာင္ရဲ႕အခ်စ္ေရးအ ေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာလူသိမ်ားလွတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပ့ခ္်ကေနတင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိ သတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ေက်ာ္ထက္ေအာင္က ပရိသတ္ေတြစိတ္ဝင္စားလွတဲ့ သူ႕ရဲ႕ အခ်စ္ေရးအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပလာပါတယ္။
“ အကုန္လုံးကမွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစသူ႕ရႈေထာင့္နဲ႕ သူဆိုတာ ရွိၾကတယ္။ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ မျဖစ္ခင္ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ခ်စ္သူရွိခဲ့ဖူးတာေပါ့ေလ။ အခုေတာ့သူက အိမ္ေထာင္ ေတာင္က်သြားပါၿပီ။ ေဝဖန္မႈေတြဆိုတာကလည္း Myanmar idol (Season-1) ကတည္းက ရွိခဲ့တာပါ။ဒီအေပၚမွာ ဘာမွ မခံစားရေပမယ့္ ရိုက္ခတ္မႈေတြေတာ့ ရွိလာတာေပါ့။
ပုထုဇဥ္တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ ကိုယ္က အႏုပညာရွင္လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳးအျဖစ္ေတြနဲ႕ သာမန္လူေတြရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာဘယ္လို ေနထိုင္သင့္တယ္ဆိုတာကိုကိုယ္ကျပရမယ့္ တာဝန္လည္းရွိေနျပန္တာေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အရာေလးေတြရွာေဖြရင္းႀကိဳးစားေနထိုင္တာေပါ့ေလ” ဆိုၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႕က ေျဖဆိုခဲ့တာပါ။
ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အရာေတြမွာ အမွား ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ဒီအမွားေတြထဲကေန သင္ ခန္းစာ ယူတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာအိုင္ေဒါ ၿပိဳင္ပြဲ အစကတည္းက ပရိသတ္ ေဝဖန္မႈေတြ ႀကဳံခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“ လူဆိုတာအမွားနဲ႕ မကင္းၾကပါဘူး။ အမွားဆိုတာမ်ိဳးက သူမ်ား မိသားစု ပ်က္စီးသြားေအာင္၊စီးပြားပ်က္သြားေအာင္၊သူမ်ားသားမယားဖ်က္ဆီးသြားေအာင္၊သူမ်ားမိသားစု ဘဝေတြ စုတ္ျပတ္ မသတ္သြားလို႔ရွိရင္ တခ်ိဳ႕ အမွားေတြကျပန္ခ်စ္ေပးလို႔ရတဲ့ အရာေတြရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူမ်ား အမွား၊ ကိုယ့္အမွားေတြကို ျပန္သုံးသပ္ၿပီး သင္ခန္းစာ ဘယ္လို ယူရမလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ” လို႔ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက် သားသမီး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်း – (10-8-2020 မှ 16-8-2020) အထိ
မိမိလုပ်စရာရှိသောကိစ္စများကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ ကြိမ်းသေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် မိမိကိုအကူအညီပေးမည့်သူများလည်းပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးအနည်းငယ်ချူ ချာနေလိမ့်မည် အစားမကြာခဏမှားပြီးဝမ်းဗိုက်မအီမလည်ဖြစ်နေတတ်ပါသည်စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေလည်းဝင်လာပါလိမ့်မည် အချစ်ရေးတွင်မပွင့်မလင်းမပြတ်မသားဖြစ်နေလိမ့်မည် ထီ ၇၅ပါသောထီထိုးပါ ယတြာလူသွားလမ်းချိုင့်တွေ ကိုအုတ်ခင်းဖို့ပေးပါ
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတွေဝေပြီးမပြတ်မသားဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလပါ လုပ်ငန်းတွေလည်းမပြီးမပြတ်နဲ့ကြန့်ကြာနေတတ်ပါတယ် လုပ်လက်စနဲ့တို့လို့တန်းလန်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးစိတ်တွေပါလေးလံလာတတ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘာပဲလုပ်လုပ်မလောပါနဲ့စိတ်အေးအေးထားပြီးလုပ်ပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမှတ်သားဖို့မှတ်စုထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ ကျန်းမာရေးမှာခေါင်းနောက်ပြီးသတိမကြာခဏမေ့နေတတ်ပါသည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်သစ်တွေ့ပါမည် ထီ၆၉ထပါသောထီကိုထိုးပါ ယတြာ သစ်ခွဖျော်ရည်ကိုဘုရားကပ်လှုပေးပါ
ရပ်ဝေးခရီးကိစ္စ နိူင်ငံရပ်ခြားကိစ္စများဆောင်ရွက် ထားပါကအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ပွဲစားလုပ်ငန်းလုပ်သူများ အကျိူးအမြတ်ကြီးကြီးရရှိပါလိမ့်မည် မြေကိစ္စများအကျိူးအမြတ်ရတတ်သလိုအမွေအနှစ်ဆိုင်ရာကိစ္စများအထူးအဆင်ပြေပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများဆေးကောင်း ဝါးကောင်းတွေ့မည် အချစ်ရေးတွင် ချစ်ရသူထံမှ ချစ်အဖြေရရှိပါမည် ထီ69ပါသောထီကိုထိုးပါ ယတြာ နိူ့ထမင်းကိုဘုရားလှုဒါန်းပေးပါ
မိမိအတွက်လုပ်ငန်းအခွင့်အလန်းကောင်းများကြုံရမည့်ကာလပါ မိမိဘက်ကသာရရှိလာသောအခွင့်အရေးကိုအမိအရလက်ဆုပ် လက်ကိုင်ပြုပြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားသွားဖို့လိုပါသည် ပစ္စည်းပျောက်ငွေပျောက်စာရင်းဇယားမှားခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည် ဘာပဲလုပ်လုပ်အယုံမလွယ်ပါနှင့်သတိထား၍ အလုပ်လုပ်ပါ ခြေထောက်မတော်တဆထိခိုက်မိတတ်ပါသည် အချစ်ရေးတွင်ကိုယ်ချစ်နေတာကတစ်ယောက်ကိုယ့်ပြန်ချစ်နေတာကတစ်ယောက်ဖြစ်နေလိမ့်မည် ထီ85ပါသောထီထိုးပါ ယတြာလူသွားလမ်းချိူင့်တွေခင်းဖို့ပေးပါ
စိတ်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေရတတ်သောကာလပါ အာရုံကြောအားနည်းခြင်း သတိမကြာခဏမေ့တတ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည် ကျန်းမာရေးအထူးဂရုပြုရမည့်ကာလပါ ခရီးတစ်ခုထွက်ရမည်ကောင်းသောခရီးပါ ခရီးထွက်ရင်းမိမိအတွက်အကျိူးအမြတ် ရနိူင်သောအခွင့်အလန်းကောင်းများနှင့်ကြုံရပါလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကံအလွန်စန်းပွင့်နေပါမည် ထီ90ပါသော ထီကိုထိုးပါ ယတြာ ရွှေရင်အေးဘုရားကပ်လှုပါ
ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရပ်များကြုံရတတ်သောကာလပါ အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တွေကြုံရ တတ်ပါတယ်ဂမ္ဘီရပစ္စည်းတွေလည်းဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ် အလုပ်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက်စကားပြောဆိုမူများအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် အလုပ်လျှောက်ထားသူများအလုပ်အကိုင်ရရှိပါလိမ့် မည်အစပိုင်းမှလစာနည်းပေမယ့်ရေရှည်မှာလစာဝင်ငွေကောင်းလာပါလိမ့်မည် ဒူးအဆစ် အမြစ်တွေညောင်ညာပြီးမလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကံအားနည်းနေပါသေးတယ် မိမိရဲ့အချစ်အပေါ်မယုံကြည်ခြင်းခံနေရပါလိမ့်မည် ထီ၉၁ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ ဂျင်းတက်တစ်တက်ပေါ်မှာအမွှေးတိုင်တစ်တိုင်စိုက်ပြီးအိမ်ရှေ့အဝင်ဝမှာထွန်းပေးပါ
ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စများတွင်အနှောင့်အယှက်အနည်းငယ်ကြုံ ပြီးမှသာအဆင်ပြေလာ ပါလိမ့်မည် အရှေ့ တောင်အရပ်မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းရရှိမည်မိမိတွင်ဖြစ်နေသောအခက် အခဲများအတွက်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများထံမှ အကူအညီကောင်းအထောက် အကူကောင်းများရပါလိမ့် မည်ကျန်းမာရေးတွင်ရောဂါအသေး အမွှားလေးတွေမကြာခဏဖြစ်နေလိမ့် မည်ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင်မိမိချစ်ရသူထံမှမိမိမျှော်လင့်ထားသော အဖြေရရှိပါလိမ့်မည် ထီ၉၇ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ သွပ်ပြားလေးလက်တစ်ဆစ်ပေါ်တွင် ဗ ဟုရေးပြီးဆောင်ထားပါ
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာစကားမှ မပြောချင်တဲ့အထိ သင်ခန်း စာရထားတယ်” လို့ပြောလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
August 10, 2020 by Shwengwe Games
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာကျင်လည်နေတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ကောင်ကိုဟာသဖြစ်ဖြစ်အ ကြမ်း အရမ်းဖြစ်ဖြစ်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ ဘေးကနေ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးတတ်တဲ့ ဇာတ်ရံကောင်းတစ်ဦးလို့ဆိုရမှာပါ။
Covid ကာလမှာ အနုပညာရှင်တော်တော်များများ ဟာဆိုရင်ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်နားထားကြရပေမယ့်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ Online ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့အရမ်းကို ရောင်းကောင်းပြီး ရက်လွတ်တွေမရှိအောင် မအားမလပ်နဲ့ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ ” လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရေး ကြီးတဲ့ အတွင်းရေးတွေကို နှစ်ရှည် လများ စောင့်ထိန်းပေးခဲ့ပေမယ့်ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို တစ်မိနစ်တောင်မစောင့်ထိန်းပေးနိုင်ကြလို့ ကြောက်သွားတယ်။ခုဆို ဈေးရောင်းခြင်း အလုပ်ကိစ်စ မှ လွဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာစကားမှ မပြောချင်တဲ့အထိ သင်ခန်း စာရထားတယ်” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ စည်းမစောင့်တဲ့လူတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရကြောင်းရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘာစကားမွ မေျပာခ်င္တဲ့အထိ သင္ခန္း စာရထားတယ္” လို႔ေျပာလာတဲ့ ႏွိုင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရန္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ႏွိုင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့ အႏုပညာနယ္ပယ္မွာက်င္လည္ေနတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ရာဇာတ္ေကာင္ကိုဟာသျဖစ္ျဖစ္အ ၾကမ္း အရမ္းျဖစ္ျဖစ္မင္းသားမင္းသမီးေတြရဲ႕ ေဘးကေန ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးတတ္တဲ့ ဇာတ္ရံေကာင္းတစ္ဦးလို႔ဆိုရမွာပါ။
Covid ကာလမွာ အႏုပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာဆိုရင္ရိုက္ကူးေရးေတြရပ္နားထားၾကရေပမယ့္ႏွိုင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့ Online ေဈးေရာင္းတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ႏွိုင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့အရမ္းကို ေရာင္းေကာင္းၿပီး ရက္လြတ္ေတြမရွိေအာင္ မအားမလပ္နဲ႕ျဖစ္ေနတာပါ။
ဒီေန႕မွာေတာ့ ” လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေရး ႀကီးတဲ့ အတြင္းေရးေတြကို ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ေစာင့္ထိန္းေပးခဲ့ေပမယ့္ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို တစ္မိနစ္ေတာင္မေစာင့္ထိန္းေပးနိုင္ၾကလို႔ ေၾကာက္သြားတယ္။ခုဆို ေဈးေရာင္းျခင္း အလုပ္ကိစ္စ မွ လြဲလို႔ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘာစကားမွ မေျပာခ်င္တဲ့အထိ သင္ခန္း စာရထားတယ္” ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႕ စည္းမေစာင့္တဲ့လူေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရေၾကာင္းရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
← Previous Page1 … Page226 Page227 Page228 … Page285 Next →